Inta aynaan carruurta qoraalkaan kulul lagu dhengadayn doono hoos u sii gelin ayeynu qiraynaa in barlammaanka Soomaaliya qabiil lagu qaybsadaa ay ahayd fidmo iyo qooq uu Ismaaciil Cumar Ceelle ummadda soomaaliyeed ku dhebidhistay oo uu ku soo sayriyey faddaro aan weligood laga mayri karin.
Kooxda saddexaad waa wadaaddada cajaladaha duuba oo caamada u sheega daliilo qabyaaladda ama qabiilka ku ammaanaya in uu yahay bandow uu Rabbi soomaalida iyo carabta ku soo rogey, kuwaas oo aan ogayn in ay daliilahaasi fududaynayaan in ay qabiilooyinka cawaanta ahi weligood islaayaan, oo aan laga horumarin dhibaatada innaga iyo ummado kale ina naafaysay, oo metelan Afganistaan iyo Yemen asaaggood ka reebtay.
Qabiil soomaalida oo dhan haddii la isu geeyo 50% (kala bar) ah iyo mid 50 qof ah baa waxay Carta iyo meelo kale ku murmayeen ”Labo qabiil baynu nahay ee inoo kala bara!”, haddana waxaaba laga yaabaa in uusan kontonkaas ruux ku jirin qof u qalma in uu ku biiro hay’adda sharcidejinta ummadda soomaaliyeed. Sidaas awgeed intii wax la qaban lahaa waxaan laga dhammaanayn cuqdad qaciil iyo in dalka laga adeejiyo waxmarato iyo mooryaan tuugo ah, waxaana meesha ka baxaysa in xildhibaanka soomaaliyeed la garto meel uu ku dhashay iyo meel uu ka yimid, oo uu dalka oo dhammi u kharribmo sidii laanta afka soomaaliga ee BBC oo haatan noqotay fastaleeti ay Yuusuf Garaad iyo ciyaal kale qoyaanka isaga tiraan!
Hal qabiil haddii dalka oo dhan looga guuro kuma ay heshiin karaan qabiil, laakiin haddii maamulka iyo xulitaannadu ay u fidsanaadaan hab degmo waxaa dadka u furmaysa maskaxda, waxaana u hagaagaya mustaqbalka. Waxaa la noqonayaa qaran degmooyin leh oo u dhigma qarannada ay ka jiraan maamullada xalaasha ahi.
Waanadaas aynu qabyaaladda ka digney ka gadaal waxaynu gelaynaa qaybaha ay carruurtu ku kala baxaan. Waxaa la wada og yahay in aysan carruurtu markii nacnac loo qaybinayano kala sugi karin, ee uu mid kastaa rabo asaga hortii wax la siiyo, oo uusan dareemi karin dareenka iyo baahida carruurta kale.
Waxaan qabqableyaasha ka wadaa raggii dalka hubka yaal qaybsaday, oo colaadda iyo nabadduba ay gacnohooda galeen, ee kama aan wado qof ayagu intaas ay haystaan kaga masayrsan oo ku maaga in ay dagaal huriyaan, kaas oo ka sii liidan lahaa haddii uu xoogaa hub ah iyo mooryaan isla heli lahaa.
Hadalka haddii la soo koobo waxay xilli xoogaa dheer ku guuldarraysteen in ay hubka ay hayaan isku keenaan oo ay dalka gacan dawladeed geliyaan, waxaana taas keentay in aysan ahayn dad isfahmi kara ama isku taariikhnololeed ah, oo markii ay isu yimaadaan wuxuu midba ka hadlaa wax aan kan kale heerkiisa ahayn. Waxaa kale oo kala fogeeyey in uu mid kastaa qabyaalad ku xisaabtamo ee uusan aqoontiisa iyo kartidiisa ku fiirin hawsha meesha taal.
Intaas waxaa dheer in aysan qaarkood rabin in dalka dawlad laga dhiso, oo ay ugu wacan yihiin labo arrimood. Midda kowaad waa in ay beeshoodu haystaan hanti ay qolyo kale lahaayeen, midda labaadna waa in ay rabaan in ay tacab xoolaad oo sharci darro ah ka unuunufaan inta uu dalku kharriban yahay, isla markaas ay dawlad la’aanru sii dheeraato si loo illaawo hantida ummadda ku kala maqan. Kooxdaan waxaa ka mid ah Cabdiqaasim iyo Cismaan-Caato.
Ganacsiga iyo danaha noocaan ah waxaa garab lagaga helaa cadow soomaliyeed oo isugu jira soomaali damiirlaayelaal ah sida madaxda Jibuuti iyo ajaanib ay ka mid yihiin tuugo caalami ahi. Danaysato shisheeye ah baa rabta in ay Soomaaliya ku raagto sida ay tahay, waxaana u fududeeya dad soomaaliyeed oo moodaya in ay dantooda shakhsiyeed ama qabiil ku jirto in la fogeeyo dawlad shacabka hubka ka dhigta oo nabaddii soo celisa.
Wadaaddadu ma ay laha siyaasiyiin ay kaga sabatobaxaan mugdiyada adduunka, waxayna xagga siyaasadda ka fahamsan yihiin labo erey, oo kala ah ”Carab” iyo ”Itoobiya”! Wax ay danta soomaalida guud tahay iyo wax ay ayaga dantoodu tahay midna ma ay garanayaan, waxayna isugu sheekeeyaan in uu jiro nin fiican oo Usaama Laaddin la yiraahdo iyo dal xun oo Maraykan la yiraahdo iyo in ay soomaalidu la dan tahay Usaama iyo qoladiisa!
Haddii ay arkaan qabqable mid kale ku xifaalaynaya ama ku dacaayadaynaya in uu Yuhuud ama Zanbia xariir la yeelahay uuna carabta ka fog tahay waxay moodayaan in uu midkii warkaas sheegay rasuulkii oo kale yahay midka kalena uu Abuujahal oo kale yahay.
Dadka soomaalida ahi waxay wada og yihiin in ay shacabka badankiisu la xadraynayaan jacayl ay u qabaan qabyaalad iyo caaddifad reerreer loo kala dudo, waxaase yaab leh in ay jiraan dad aan qabiil jeclayn oo laga yaabo in ay xataa qabiilkooda wax ka laayaan oo markii ay beeluhi isxasuuqayaan ay xabbadoodu u dhacdo dhanka qoladooda!
In uu qofku qabyaalad iyo xamaasad ka fogaadaa waa arrin wanaagsan, waxaana loo qabaa baahi weyn si looga baxo dhibaatada, laakiin taas macneheedu ma aha in aad qabiilkaaga ama mid kale nebcaadid, isla markaas ma aha in aad cuntodoon tahay.
Kuwa sidaan ahi haddii ay shir gobol ama soomaaliyeed aadayaan waxay dantoodu tahay sidii ay inta shirka la joogo u heli lahaayeen khamro iyo jeebgashi, badadeedna aysan uga qadeen wixii risaaqad ah oo ka yimaada hawsha ka dhalandoonta shirka.
Culaysta caloosha loogu shaqaystaa wuxuu ku kala xiran yahay saddex arrimood, oo midda kowaad waa in uu qofku dalka ka soo qabtay jago sare oo uu heli karo magac aan laga eegin meel hoose oo qado wanaagsan loogu oggolaan karo. Midda labaad waa in uu aqoon leeyahay, siiba waa in uu leeyahay aqoon xiriirrada caalamiga ah iyo dhaqaalaha ku saabsan. Midda saddexaad waa in uu yahay qof u abuuran turufo iyo khiyaamo, oo ku habboon in uu si damiir la’aan ah u gali karo waddooyinka noocaan ah.
Saddexdaas calaamo haddii uu qof isku darsado wuxuu ka mid noqonayaa kuwa ugu nasiib daban uguna dheereeya tartanka caloosha lala cayaaro, isla markaas haddii labo ama mid ku sifoobo wuxuu feenanayaa lafo badan oo xaaraan ah.
Markii ay ogaadaan in uu waxqabad dhab ahi meel ka unkamay waxaa ku dhaca jirro ay moodayaan in uu calafkoodu dhadayo, waxayna la meehannaabaan fidmo aan yool lahayn, oo calooshooda keli ah ka turjumaysa, weligoodna lama arag wax ay qabteen oo aan ahayn in lagu maadaysto xoolo ay si foolxun jeedkooda ugu leexiyeen iyo in ay meelo ihaanaysan ka soo lafaysteen.
Waxaa hubaal ah haddii ay beelaha qaarkood diidaan in jamhuuriyadda la nabadeeyo oo ay ku adkaystaan in ay ka cagojiidaan in la helo siyaasad midaysan iyo maamul shaqeeya aysan suurtoobayn in la helo soomaali nabad ah, maxaa yeelay qabiilna mid kale kuma uu khasmi karo danta guud, oo sababaha arrinta Soomaaliya daahiyey waxaa ka mid ah middaas.
Magaalada Muqdisho isku celcelis waxaa maalin kasta lagu kufsadaa 500 ilaa 600 oo dumar ah, waxaana haddii ay nabadowdo furmaya shukaansi caadi ah oo uu nin kastaa middii uu ka helo la xaasiibo iyo guur xalaal ah, ninkii danbe oo gabar xoogana waxaa loo dhiibayaa boolis soomaaliyeed.
Wuxuu yahay madaxweynuhu? Maxaad ka aamminsan tahay? Waxaad ka aammintey wax aan jirin oo ah in uu kaa awood sarreeyo! Sidee baad ku ogaatey in uu leeyahay awood aadan lahayn? Waxaad ku ogaatey in aadan weligaa soo marin nolol caddaalad ku dhisan. Madaxweynuhu ama wasiirku wuxuu u shaqotagaa xafiis uu ka qabto hawlo ka yar kuwa aad adigu dalka u haysid, oo uu sharcigu u qeexayo. Hawlohoodu kama ay sharaf badna kuwa aad qabatid. Hantida idiin dhexaysa uma ay laha awood ay ku qaataan sida aadan adiguba ugu lahayn, haddii ay u yeeshanna ma ay aha madaxweyne iyo wasiir ee waa qabqableyaal dagaal.